अपत्त्यारिलो: सेभेन एलेभेनले आफ्नो कर्मचारीलाई करोडौ बराबरको तलब दिन बाकि | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > NEWS > अपत्त्यारिलो: सेभेन एलेभेनले आफ्नो कर्मचारीलाई करोडौ बराबरको तलब दिन बाकि
सेभेन एलेभेन जापानले आफ्नो ३०००० कर्मचारीलाई ४९० मिलियन (करिब ४।५ मिलियन अमेरिकन डलर) बराबरको पैसा दियन बाकि रहेको देखिएको छ। यो समस्या काम गर्ने कर्मचारीहरुको ओभर टाईमको तलब हिसाब गर्दा भएको त्रुटिले गर्दा हो। यो गल्तिले सेभेन एलेभेनको ८१२९ स्टोरमा समस्या परेको थियो। कम्पनिले एउटा कामदारलाई २८ लाख येन दिन परेको रहेछ।
सबै भन्दा अचम्मको कुरा त कम्पनिलाई यो त्रुटि २००१ ताकानै थाहा भएको थियो। तर सेभेन एलेभेनले त्यस पश्चात आफ्नो त्यो गल्ति राम्रो संग स्वुकरेको थिएन र त्यस’bout कुनै जानकारी पनि थप प्रदान गरेन।
Cheerly MOOD(@cheerly_mood)がシェアした投稿 – 2019年11月月29日午前4時52分PST
१८ बर्ष पछि सेभेन एलेभेनले यो आस्चर्यजनक तथ्य सबै सामु लिएर आएको छ। त्यति मात्र नभएर उसले सबैलाई माफी पनि मागेको छ। तर कम्पनीले आफुले दिन बाकि पैसा तिर्ने बताए पनि यो पैसा पाउने तरिका निकै झन्झटिलो रहेको देखिन्छ। यो पैसा पाउन पहिले काम गरेका कामदारले आफ्नो पेमेन्टको रेकर्ड देखाउनु पर्ने रहेको छ। समस्या के भने यो गल्ति सन् १९७० बाट सुरु भएको देखिन्छ। त्यसैले सबै संग पैसा पाएको तलबको रेकर्ड छ भन्ने हुदैन। यसो हुदा पैसा पाउनु पर्ने मानिसले पनि पैसा नपाउन सक्दछन। यो कुराले मानिसहरुले सामाजिक संजालमा आफ्नो आक्रोश पोख्दै आएका छन्। हुन पनि हामी जापानी सिस्टममा धेरै बिस्वास गर्छौ तर यस्तो गल्ति भएको हुन्छ।
Understandably, there is alreadyafuror online since people don’t tend to keep records that old. Therefore, 7-Eleven does not seem to truly want or be willing to rectify the issue and provide those unpaid wages.
Kaylad(@kayladfrost)がシェアした投稿 – 2019年12月月8日午前6時34分PST
यो पनि खबरमा आएको छ कि सेभेन एलेभेनको प्रेसिडेन्टले आफ्नो तलबको १० % तिन महिनाको लागि कटौती गर्ने छन्। उनि यहि वर्षको अप्रिल महिना बाट कम्पनिको प्रेसिडेण्ट भएका छन्। तर यो तिन महिनाको उनको तलबको १०%ले कति चाही समस्या टर्ला त्यो भने हेर्नु पर्नेछ।
सेभेन एलेभेनको यो कामलाई मानिसहरुले PR को लागि गरेको भन्न थालिएको छ। किनकि यहि वर्ष केहि यस्ता घटनाहरु घटेका जसले सेभेन एलेभेनको कर्पोरेट समाजमा दाग लगाएको छ।
हजुर आफै सोच्नुहोस् यो १८ वर्ष वा ४९० मिलियनको मात्र कुरा होइन। मानिसहरुले आफुले गरेको कामको पैसा पाएनन, त्यसैगरी मानिसहरु यत्रो ठुलो कम्पनीले के गरि यस्तो गल्ति गर्न सक्यो भन्ने सोचेका छन्। त्यो गल्ति पनि अरुनै कम्पनि ले पट्ट लागाएर भनेको हो। यदि यो कुरा बाहिर आउन नपाएको भए सेभेन एलेभेनले यो कुरा आफैले बाहिर लिएर आउथ्यो कि आउदैन थियो होला। त्यसैगरी कति मानिसहरु बिदेशी कामदार थिए होलान, जो आफ्नो देश फर्की सके होलान। कति जापानमै छन् होलान तर पेमेन्टको रेकर्ड नभएर पैसा क्लेम गर्न सक्दैन होलान।
Miss Vicky(@halffling)がシェアした投稿 – 2019年11月月18日午前6時49分PST
थप रूपमा, यस्ता स्टोरमा जापानमा सबैभन्दा बढी दुर्व्यवहार हुने मजदुरहरू काम गरिरहेका हुन्छन। यो धेरैलाई ज्ञात छ कि विशाल संख्याका ग्राहकहरूले स्टोरमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूमा उनीहरूको क्रोध र निराशालाई उतार्न पन्चिंग ब्यागको व्यवहार गर्दछन्। यदि तपाइँ हालै काम गर्ने वा सुविधा स्टोरमा काम गर्ने कसैलाई सोध्नु भयो भने उनीहरूको सबैभन्दा खराब किसिमको ग्राहक के हो भने, उनीहरूले धूम्रपान गर्नेहरूलाई भन्लान्। 7-इलेभन, फ्यामिली मार्ट, र लसन जस्ता स्टोरहरूमा काम गर्ने धेरै मानिसहरूलाई अनुभव गरिएको छ र केही सेकेन्डमा उनीहरूको सिगरेट किन्न चाहने ग्राहकहरूले दुर्व्यवहार गरेका छन्। तसर्थ, कर्मचारीहरू अक्सर यी खराब अनुभवहरू मार्फत जानुपर्दछ। गाह्रो तालिकामा काम गर्दा र २४ घण्टा स्टोरहरू चलाउनका लागि ओभर टाईम गर्नु पर्दछ(जापानको श्रम अभावको बीचमा परिवर्तन हुने प्रवृत्ति); र अन्तिममा पाउनु पर्ने भन्दा कम तलब पाएको थहा पाउदा सबैलाई नराम्रो लाग्दछ।
@ajax240kがシェアした投稿 – 2019年11月月2日午後7時52分PDT
विचार गर्नुपर्ने अर्को कुरा जापानको कार्य संस्कृति हो जुन मानिसहरूले धेरै घण्टा काम गर्दछन्। जापानमा ओभरटाइम काम गर्नु भनेको हप्ताको एक अतिरिक्त घण्टा वा दिनको एक घण्टा होइन। अधिक समय काम गर्ने व्यक्तिहरू मूल रूपमा उनीहरूको अफिसमा बस्छन्। केही अन्तिम कर्मचारीहरू तिनीहरूका अन्तिम ट्रेन छुटेपछि पछि उनीहरूको कार्यालयमा सुत्नु कुनै असामान्य कुरा होइन। देंचु कंपनीमा काम गर्ने एक कर्मचारीले अघिल्लो महिना १५६ घण्टाको ओभर टाइममात्र गरेछन। उनले त्यो महिना ३०० भन्दा बढी घण्टा काम गरे। त्यहि भएर देंचुलाइ लेबर सस्थाले वार्निंग पनि दिएको छ। २०१५मा माचुरी ताकाहाशीले आफ्नो कम्पनीमा धेरै ओभरटाईम काम गर्नु परेको भएर आत्मा हत्या गरेकी थिइन्।
Rob Harvey(@_robharvey_)がシェアした投稿 – 2019年10月月27日午後7時36分PDT